» यति कडा प्रतिस्पर्धामा को पुग्ला उत्कृष्ट ६ मा ?
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १९:५१
चन्द्र घलान, मकवानपुर, १४ फागुन । अन्तराष्ट्रिय अनलाईन गायन प्रतियोगिता हल अफ फेम सिजन २ मा यो साता उत्कृष्ट ६ प्रतियोगीहरु छानिदैछन् । यसअघि च्यालेञ्ज राउण्डमा भिडेर उत्कृष्ट ९ सम्म आईपुगेका प्रतियोगीहरुमध्ये शुक्रबार ३ जना प्रतियोगीहरु बाहिरिनेछन् । उनीहरुले उत्कृष्ट ९ को प्रस्तुतिका क्रममा उत्कृष्ट ९ मा परेका सबै प्रतियोगीहरुले निर्णायकहरुबाट मिश्रित प्रतिकृया पाएकाले उत्कृष्ट ६ भित्र कुन कुन प्रतियोगीहरु पर्छन् भनेर एकिनका साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन । तपाईको विचारमा उनीहरुमध्ये कुन कुन प्रतियोगीहरु उत्कृष्ट ६ मा पर्लान् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । एमएनटीभी अष्ट्रेलियाको आयोजनामा भइरहेको यो शोको प्रसारण हिमालय टेलिभिजनबाट हरेक शुक्रबार र शनिबार राति ८ बजे भईरहेको छ । शोका निर्णायकहरुमा वरिष्ठ गायक दीप श्रेष्ठ, कन्दरा व्याण्डका चर्चित गायक विवेक श्रेष्ठ र चर्चित गायिका रजिना रिमाल रहेकी छिन् । यस भिडियो सामग्रीमा उत्कृष्ट ९ मा कडा प्रतिस्पर्धा गरेका ९ जना प्रतियोगीहरुले हालसम्म प्राप्त गरेका अंक र उपलब्धिका आधारमा उत्कृष्ट ६ मा पुग्नसक्ने सम्भावना कस्तो छ भनेर चर्चा गर्दैछौँ । साथै उनीहरुको छोटो परिचय पनि समावेश गर्दैछौँ । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–
हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ९ मा भिडेका रुपेश पोख्रेलले उत्कृष्ट ९ को प्रस्तुतिका क्रममा ‘एउटा मान्छेको मायाले कति’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिमा निर्णायकहरुले मिश्रित प्रतिकृया दिँदै उनको प्रयास राम्रो भएको बताएका थिए । उनको प्रस्तुति आसा गरेजति नभएता पनि गाह्रो गीतमा राम्रो गाउने प्रयास गरेको भन्दै उनलाई केही सुधार्नुपर्ने कुराहरुमा पनि सुझाव दिएका थिए । रुपेशले यसअघि च्यालेञ्ज राउण्डमा मिलन लुवागनसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । निर्णायकहरुले रुपेशलाई उत्कृष्ट ९ को लागि छनौट गरेका थिए । । उनले उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा जम्मा २० अंक प्राप्त गरेका थिए । झापाको काकरभिट्टा निवासी रुपेश मेची भन्सारमा कार्यरत छन् । रुपेश यसअघि गायन सिक्नुका साथै गीगहरु पनि गर्नेगर्थे । उनी अहिले भने हल अफ फेममै व्यस्त छन् । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ९ मा भिडेका पूर्ण विकले उत्कृष्ट ९ को प्रस्तुतिका क्रममा ‘लौ सुन म भन्छु’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिमा निर्णायकहरुले निक्कै राम्रो प्रयास गरिएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए । सकेको जति धेरै राम्रो प्रस्तुति दिएको भन्दै निर्णायकय विवेक श्रेष्ठले उनको प्रस्तुतिमा ताली पनि बजाएका थिए । उनको सांगितिक भविष्य पनि राम्रो भएको उनले बताएका थिए । पूर्णले यसअघि च्यालेञ्ज राउण्डमा सुप्रिया पौडेल र दिपक भोटेलसँग एउटै गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनले उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा जम्मा १८.५ अंक प्राप्त गरेका थिए । सुनाकोठी ललितपुर निवासी पूर्णको स्थायी घर भने उदयपुरको कटारीमा पर्छ । निर्माणको क्षेत्रमा समेत काम गरिरहेका उनी शैलुङ रोधी घरमा पनि गायकका रुपमा कार्यरत छन् । उनी संगीत क्षेत्रमा लागेकोमा पूर्णकी जीवनसाथी पनि निक्कै खुशी भएको बताउँछिन् ।
हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ९ मा भिडेका नाम्साङ राईले उत्कृष्ट ९ को प्रस्तुतिका क्रममा ‘प्रियसीका यादहरु’ बोलको गीत गाएका थिए । भावनामा डुबेर सुमधुर गीत गाएका नाम्साङको गायनलाई निर्णायकहरुले प्रशंसा गरेका थिए । उनले शब्द उच्चारण र सुरमा केही ध्यान दिनुपर्नेमा पनि निर्णायकहरुले सुझाव दिएका थिए । नाम्साङले यसअघि च्यालेञ्ज राउण्डमा दिनेश गुरुङ र सुरेन लिम्बुसँग एउटै गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । नाम्साङले उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा जम्मा २० अंक प्राप्त गरेका थिए । हङकङमै जन्मिएका नाम्साङ हाल हङकङकै एक होटलमा बार सुपरभाईजरका रुपमा कार्यरत छन् । आफ्नो गुरुबाट हल अफ फेमका बारेमा सुनेर सहभागी भएका नाम्साङले संगीत क्षेत्रमै अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छन् । उनी कोलुन हङकङमा बसोबास गरिरहेका छन् । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ९ मा भिडेकी सुदिक्षा तामाङले उत्कृष्ट ९ को प्रस्तुतिका क्रममा ‘यति धेरै माया दिई’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । अडिसन राउण्डदेखि नै चर्चामा भएकी सुदिक्षाको आवाजको प्रशंसा गर्दै निर्णायकहरुले उनले राम्रो प्रयास गरेको बताएका थिए । सुदिक्षाले गायनमा केही मेहनत पनि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनलाई केही सुझाव समेत निर्णायकहरुले दिएका दिए । सुदिक्षाले च्यालेञ्ज राउण्डमा बिमला श्रेष्ठ र नेहा उप्रेतीसँग एउटै गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनले उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा जम्मा २३ अंक प्राप्त गरेकी थिईन् । उनी उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेकी प्रतियोगी पनि हुन् । सुदिक्षा भक्तपुरको सृजना नगर निवासी हुन् । रेष्टुरेन्टबाट गायन क्षेत्र सुरुवात गरेकी सुदिक्षा ब्याण्डमा पनि आवद्ध छिन् ।
हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ९ मा भिडेका रोनिश श्रेष्ठले उत्कृष्ट ९ को प्रस्तुतिका क्रममा ‘पोखिएर घामको झुल्का’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिमा पनि निर्णायकहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका थिए । रोनिशले पनि गीतलाई राम्रो गाउने प्रयास गरेको बताएका थिए । उनलाई नोट तथा भावमा ध्यान दिन पनि निर्णायकहरुले सुझाव दिएका थिए । उनले च्यालेञ्ज राउण्डमा दर्पण रिजालसँग प्रतिपर्धा गरेका थिए । उनले उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा जम्मा १९ अंक प्राप्त गरेका थिए । रोनिश धरान निवासी हुन् । गायनमा सानैदेखि रुचि राखेका रोनिशलाई अग्रज गायकहरुले पनि गीत गाउन प्रोत्सहान दिएका थिए । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ९ मा भिडेका समिर लिम्बुले उत्कृष्ट ९ को प्रस्तुतिका क्रममा ‘जुन फुल मैले’ बोलको गीत गाएका थिए । समिरको प्रस्तुतिमा पनि निर्णायकहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका थिए । समिरलाई पनि निर्णायकहरुले भावमा डुबेर गाउन सुझाव दिएका थिए । समिरले यसअघि च्यालेञ्ज राउण्डमा निरज नगरकोटी र सुदिप जैरुसँग एउटै गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनले उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा जम्मा २०.५ अंक प्राप्त गरेका थिए । उनी उत्कृष्ट ५० बाट उत्कृष्ट २७ छनौटका क्रममा सबैभन्दा बढी अंक पाउने ५ प्रतियोगीहरुमध्ये एक प्रतियोगी समेत हुन् । गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने समिर अहिले भोकल सिक्दै छन् । उनी काठमाडौँ कपन निवासी हुन् ।
हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ९ मा भिडेका टिका मगरले उत्कृष्ट ९ को प्रस्तुतिका क्रममा ‘आजभोलि हरेक साँझ’ बोलको गीत गाएका थिए । उत्कृष्ट ९ मा प्रस्तुति दिएकाहरुमध्ये टिकाले निक्कै राम्रो गीत गाएको भन्दै निर्णायकहरुले उनको प्रशंसा गरेका थिए । निर्णायक रजिना रिमालले उनको प्रस्तुति उत्कृष्ट ९ मा पुगेका सबै प्रतियोगीहरुको तुलनामा राम्रो भएको बताईन् । निर्णायक दिप श्रेष्ठले पनि उनको आवाजमा मिठास भएको भन्दै उनको प्रशंसा गरेका थिए । निर्णायक विवेकले पनि उनको आवाजको प्रशंसा गर्दै राम्रो गाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । टिकाले यसअघि च्यालेञ्ज राउण्डमा प्रकाश प्रधान र निमा शेर्पासँग एउटै गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा टिकाले जम्मा २१ अंक प्राप्त गरेका थिए । उनी सर्वाधिक अंक पाउने ५ प्रतियोगीहरुमध्येका एक पनि हुन् । टिका ईलाम निवासी हुन् । कक्षा ९ मा अध्ययन गर्ने क्रममा पहिलो पटक स्टेजमा गीत प्रस्तुत गरेका टिकाले त्यसबेला शिक्षक, अभिभावक र साथीहरुबाट राम्रो प्रशंसा पाएका थिए । त्यही प्रशंसाकैबिच उनी संगीत क्षेत्रमा लाग्ने अठोटका साथ अघि बढेका छन् । उनले विद्यालय जीवनदेखि नै गायन क्षेत्रमा रुचि देखाएका थिए । गायनमा रुचि भएता पनि घरको अवस्थाका कारण उनी विदेशिन बाध्य भएका थिए । विदेशमै भएपनि उनले गायन क्षेत्र छाडेनन् । उनी निरन्तर साँगितिक क्षेत्रमै अगाडि बढीरहेका छन् ।
हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ९ मा भिडेकी जेन्नी तामाङले उत्कृष्ट ९ को प्रस्तुतिका क्रममा ‘यति चोखो यति मिठो’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको आवाजमा धेरै मिठास भएता पनि गायनमा समस्या देखिएको निर्णायकहरुले बताएका थिए । उनले च्यालेञ्ज राउण्डमा छेवाङ शेर्पासँग एउटै गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेकी थिईन् । उनले उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा जम्मा १९ अंक प्राप्त गरेकी थिईन् । ३ वर्षदेखि अध्ययनका सिलसिलामा अष्ट्रेलियामा रहेकी जेन्नी संघर्षका वाबजुद संगीत क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेकी छिन् । धनुषाकी जेन्नी मेलबर्नमा बस्छिन् । काम र अध्ययनलाई एकैसाथ अघि बढाएकी उनी संगीतमा पनि रुचि राखेर अगाडि बढिरहेकी छिन् । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ९ मा भिडेका विजय सुनारले उत्कृष्ट ९ को प्रस्तुतिका क्रममा ‘केही मिठो बात गर’ बोलको गीत गाएका थिए । विजयको प्रस्तुतिमा निर्णायकहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका थिए । निर्णायक रजिना रिमालले उनी आफ्नो मनपर्ने प्रतियोगी भन्दै उनले राम्रो गाएको बताएका थिए । अन्य दुई निर्णायकहरुले आसा गरेजति नभएता पनि उनको प्रस्तुति सामान्यतया राम्रै भएको बताएका थिए । विजयले यसअघि च्यालेञ्ज राउण्डमा सन्दिप गहतराज र सञ्जीवनी महर्जनसँग एउटै गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनले उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा जम्मा १८ अंक प्राप्त गरेका थिए । गायनक्षेत्रमै लागेका विजय गीतार बजाउन र गीत कम्पोज गर्न शौखिन् छन् । बुटवलको बर्दाघाट निवासी विजयको साँगितिक जीवन सानैदेखि सुरु भएको उनी बताउँछन् । आफ्नी दिदीका साथै घरका सबै परिवारबाट संगीत क्षेत्रमा लाग्न प्रेरणा पाएका विजयले बर्दघाटमा रहेको श्रृति संगीत विद्यालयबाट उनले केही महिना संगीतका साथै गीतार पनि सिकेका थिए ।